Camera-fomban'ny vatana: Tactics izay mety hanampy amin'ny hôpitaly | Vahaolana OMG
Fakan-doka amin'ny vatana: Tactics izay mety hanampy amin'ny hôpitaly
Manerana izao tontolo izao dia miditra amin'ny hopitaly isan'andro ny olona satria iharan'ny tifitra, sy ny fikapohana ary ny fikapohana ary koa ny filàna tsy misy herisetra. Betsaka no ekena ho fikarakarana fohy na maharitra. Amin'ny faritra be olona toy izany, dia tsy zavatra tsy ampoizina ny herisetra. Indraindray ny marary tsy mety amin'ny mpiasa, ny mpiandry raharaha dia niantsoantso ny mpitsara na ny olona tsy mpandray anjara niditra tao amin'ny hopitaly ary namorona herisetra.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny fiarovana ara-pahasalamana sy ny fiarovana (IAHSS), saika ny 80% amin'ny hopitaly dia mila rafitra fanaraha-maso sy fanavaozana CCTV. Ny mpitantana ny fahasalamana sy ny matihanina amin'ny fiarovana dia mila manaparitaka vahaolana fanaraha-maso amin'ny vidéo mba hiarovana ny marary, mpitsidika, mpitsabo, mpitsabo, ary mpiasan'ny hopitaly, birao, foibem-piarovana, ary trano fitsaboana maharitra.
Ny fakantsary mitafy vatana dia nampidirina ao amin'ny hopitaly hanatsarana ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana. Namboarina ireo fakantsary handefasana hafatra mazava momba ny fandeferana aotra ho an'ireo manararaotra na manafika ny mpiasa ao amin'ny hopitaly.
Ireo fitaovana ireo dia manome ny fandraisana andraikitra lehibe kokoa amin'ny fifaneraserana eo amin'ny mpiasa ambulans sy ny marary. Mametraka tsy tapaka amin'ny toe-javatra sarotra sy mampidi-doza ny Paramedika. Manampy amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa aminy ny fakan-tsary mba hiantohana ny hetsika aorian'ny asa ratsy ataon'ny mpiasa. Ny fakan-tsary amin'ny vatana no manampy eto amin'ny alàlan'ny fanomezana horonantsary tsy miangatra sy azo antoka amin'ny tsipika. Ny rakitsary fakana horonantsary dia voatahiry ao anaty karatra SD azo antoka avy eo izay azo ampiasaina any amin'ny fitsarana.
Ireo firaketana ireo fakantsary ireo dia azo ampiasaina ho an'ny mpanazatra sy fanofanana, ary koa manampy ny fomba fitsaboana tsara. Ireo vondron'ny fiara mpitondra marary dia afaka mahazo tombontsoa betsaka amin'ny alàlan'ny fijerena ny firaketana an-tsoratra hanatsarana ny valin-tenin'izy ireo amin'ny toe-javatra sy ny fandraisana valiny tena ilaina hanampiana amin'ny fanapahan-kevitra mamonjy aina. Ireo fakantsary ihany koa dia azo ampiasaina ho fampiofanana ho an'ny mpiasan'ny mpiasa vaovao eny an-tsambo ary mampiseho azy ireo fomba manokana sy ny fomba hamaliana azy ireo.
Miatrika fanararaotana am-bava sy ara-batana ny Paramedika raha mandeha am-piasana izy ireo, ary ireo fakantsary ireo dia manampy amin'ny fahitana ireo olona ireo. Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia safidy malaza amin'ny fiarovana ny mpiara-miasa eo amin'ny sehatra taloha. Ny mpiasa paramedic dia manokan-tena ho fiarovana sy mikarakara ny olona amin'ny fotoan'izy ireo tena ilainy ary na iza na iza amin'izy ireo iharan'ny herisetra na herisetra dia tsy rariny tanteraka.
Olana atrehin'ny hopitaly
Manome fiarovana tsara ho an'ny marary, mpitsidika ary mpiasa
Mifanaraka amin'ny baikon'ny governemanta sy ny refy fiarovana
Fiarovana amin'ny fanamelohana diso sy fanenjehana
Mandresy ny fanerena ny teti-bola
Fampidirana ireo boaty fanaraha-maso sy fikaovana fanadihadiana amin'ny horonantsary
Ny vokatra fakan-tsary OMN
NY FAHAGANANA AZY
Salama fitahirizana ara-pahasalamana sy fikajiana avo lenta amin'ny fitaovana rehetra
Hiaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny rafitra GPS voaorina
Fitahirizana karatra fitadidiana SD
Fijery mivantana amin'ny alàlan'ny 4G
Fanekena ny endrika
Ny rakitsoratra dia voahodina ary tsy azo ovaina
Ny rakitsoratra dia voatahiry mandritra ny andro 31 raha tsy hoe angatahina hangataka azy hihazona azy io maharitra kokoa
Manome fitaovana, sensor, trackers, tele-fanaraha-maso, teknolojia an-tariby ary fitaovana fanaraha-maso tena misy ao an-trano sy ny fampiharana azy ireo ho an'ny mpitsabo
Ny fakan-tsary amin'ny vatana dia afaka manatsara ny fahombiazana sy ny fahafaham-po amin'ny karazana asa samihafa. Raha misy ny fanadihadiana miaraka amin'ireo mpiasan'ny fiarovana, ohatra, ny fakantsary dia voaporofo fa misy vokany mampitony an'ireo mpikambana mahery setra amin'ny vahoaka. Io kosa dia nanatsara ny fahafaham-po amin'ny asa amin'ny fanaovana ny mpiasa hahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny asan'ny asany. Aorian'ny fisedrana any amin'ny paroasy ara-tsaina dia tadiavin'ny governemanta hampiasa fakan-tsary ireo mpitsabo. Tamin'ny 2014, ny fampiasana fakan-tsary ataon'ny mpitsabo mpanampy dia notsapaina voalohany tany amin'ny paroasy roa tao Broadmoor, hopitaly mpitsabo aretin-tsaina ambony any Crowthorne, Berkshire. Ny sary dia nanome porofo hanohanana ny fanenjehana taorian'ny tranga mahery setra tany ary voamarika ihany koa ny fihenan'ny tranga fanafihana mpiasa. Ankoatr'izay, nisy ny "fihenan'ny fitondran-tena tsy tia ady sy mahery setra", hoy ny mpitondra tenin'ny West London NHS Trust, izay mitantana Broadmoor.
Jim Tighe, manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana fiarovana eo an-toerana ao West West NHS Trust, dia nilaza fa nahatonga ny mpiasa hahatoky tena kokoa ny fakantsary. "Efa nampiasa ny firaketana nandritra ny fotoana maromaro izahay mba hanaovana famerenana ny tranga lehibe ary tena nanampy tamin'ny fahitana mazava sy nahare ny zava-nitranga izany. Manampy amin'ny fampihenana ny halavan'ny fotoana anaovana fanadihadiana izany satria efa nahita izany mahaleo tena izany ianao, ”hoy izy.
Ankoatr'izay, ny fahaiza-miaina mivantana amin'ny fakan-tsary dia mamela ny dokotera eny an-toerana tsy hanome toro-hevitra ara-pitsaboana amin'ny paramedics manatrika tranga sarotra amin'ny tany, raha ilaina.
Ny hopitaly dia miavaka amin'ny fanamby fiarovana manokana ho an'ny indostria manokana izay natambatra tao anaty fikambanana iray. Ho fanampin'ny faritra ankapobeny, matetika ny hopitaly dia manana trano fisakafoanana, fivarotana fanomezana, fivarotam-panafody, mitazona sela ho an'ny fitsaboana voafonja sy faritra fitsaboana aretin-tsaina - izay maneho ny teknolojia tsy manam-paharoa. Ny fitaovana fiarovana ny mpitandro ny filaminana OMG dia tonga amin'ny sehatra malalaka kokoa hanatanterahana ireo filàna isan-karazany ireo. Ny fandraisam-peo, ny fifehezana ny fidirana, ny fanairana, ny fakantsary efa tonta amin'ny vatana, ary ny fitaovana hafa dia mety haparitaka sy hiaraka amin'ny programa fiarovana ny hopitaly.
Misy ny fitaovana azontsika any an-tsena ho fiarovana ny hopitaly sy ho an'ny departemanta hafa
Fanaraha-maso amin'ny feo fanaraha-maso Audio
Kodiarana Mini Body Worn mitesim-bolana (BWC055)
Camera Camera (BWC004)
Sarin'endam-bidy miendrika simenitra amin'ny finday [tsy misy efijery LCD] (BWC059)
Camera Camera, ny fitahirizana ivelany - SD Card 32GB-128GB (BWC043)
Ora ela [16 Hrs] Famoahana fakantsary vita amin'ny vatana (BWC061)
Mini Camera Worn Camera - Super Video Compression (BWC058)
Fitaovam-pitiavam-bidy mitera-pery (BWC056)
Na izany aza, zava-dehibe ny hitazomana ao an-tsaina ireo olana ara-piarovana mety hitranga miaraka amin'ny haitao toy izany. Ny olon-tsotra dia nanaiky tamin'ny ankapobeny fa manahy izy ireo amin'ny mety hahazoan'ny antoko fahatelo tsy nahazo alàlana hiditra amin'ny mombamomba azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary vita amin'ny vatana. Naneho ny ahiahin'izy ireo ihany koa izy ireo amin'ny fomba mety hiteraka fanavakavahana amin'ny ho avy noho ny fahafantarana azy ireo. Ny ankamaroan'ny mpitsabo dia tsy nanaiky fa hanakorontana ny fifandraisan'ny dokotera sy ny marary ny fakan-tsary amin'ny vatana fa manahy izy ireo ny amin'ny fiarovana ny fampahalalana momba ny marary. Na izany aza, na ny besinimaro na ny dokotera dia samy nanohana ny fampiharana ny rafitry ny fakantsary mitafy vatana, nanombatombana fa ny tombony azo tratrarina mihoatra ny loza mety hitranga. Ny ankamaroan'ny vahoaka dia nino fa ny manam-pahefana dia tokony hanana fidirana feno amin'ny angon-drakitra raha toa kosa ny mpiasa mpitsabo mpanampy, ny mpivarotra fanafody, ny laboratoara ary ny mpitsabo hafa dia tokony hanana fidirana amin'ny ampahany.
Hita amin'ny: https://www.salientsys.com/industries/hospitals-healthcare/
Departemantan'ny laboratoara ara-pitsaboana, A., 2018 Feb. NCBI publishmed.gov. [Online]
Hita amin'ny: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29331259
DeSilva, D., nd Hita. [Online]
Hita amin'ny: https://www.revealmedia.co.uk/5-ways-body-cameras-could-help-ambulance-staff
Hardy S, Bennett L, Rosen P, Carroll S, White P, Palmer-Hill S, (2017. [Amin'ny Internet]
Mei, TT, FEB 1, 2019, Ny Straitstimes. [Online]
Hita amin'ny: https://www.straitstimes.com/singapore/health/body-worn-cameras-for-scdf-paramedics
Morris, A., May 30, 2019. Express & star [Online]
Hita amin'ny: https://www.expressandstar.com/news/health/2019/05/30/ambulance-staff-to-wear-body-cameras-as-40pc-of-paramedics-attacked/
Mulholland, H., Wed 1 Mey 2019. TOVONY NY TANJONA. [Online]
Hita amin'ny: https://www.theguardian.com/society/2019/may/01/body-cameras-protect-hospital-staff-patients-violence-mental-health-wards
Fakan-doka amin'ny vatana: Tactics izay mety hanampy amin'ny hôpitaly no farany niova: Jolay 29th, 2020 by Admin
5082 Total Views 1 Views Today